Chii Chinonzi Chikapa Mumba (Part 2) Chii Chinonzi Chikapa Mumba (Part 2)
Chii Chinonzi Chikapa Mumba (Part 2)
Paunogamuchira ipapo usangoita wakati tasa uchingobaiwa pamwepo mukati. Unopota uchimheyesa chiuno LEFT and RIGHT, ukuwo uchigonyesa chiuno chombo chichimbopindawo neANGLE yakasiyanasiyana, asi uku RYTHM yako usina kuirasa.
Unotohwa uchikurungiwa sebota riri mupoto chombo chave mugoti, saka mafambire acho ndeawa, zvichibva pakushandisa chiuno kwemukadzi.
Nokuti isu vakadzi tine magaro makuru kupfuura evarume chiuno chine simba uye makumbo akasimba. Vashoma vakadzi vaunohwa vachiti vanohwa musana asi varume vakawandisa vanokomburena nomusana. Uri wega unokwanisa kupurakitiza kushandisa chiuno. Handiziviwo kune vakadzi vanemuviri mukuru kuti zvinofamba sei. Ini kuona kwangu munhukadzi ngaagare ari munhu ari FIT. Ini ndinochovha bhasikoro kakawanda pavhiki. Kubva pandakazvara mwana ndikada kudzikisa dumbu, ndakaona kuti bhasikoro rinoshanda chose. Makumbo anosimba, chiuno chinosimba, chikapa woita sharaude. Musi wawakarongera murume iwe wega mapedza unohwa muviri kuti rukutu fungwa yodavira kuti ndagonekwa nhasi.
Kana wahwisisa chiuno chako unokwanisa kutungamirira murume kubva paanopinza chombo kusvika paanodiridzira urume uchipa CONTROL pasipidhi yake. Ndakamboudzwa neimwe shamwari yangu kwahi kana wakavata nomusana funga munhu ari kupepeta nzungu murusero. Chishandisa chiuno kupepeta murume ari pamusoro. Mese munonakigwa zvokuti. Kana murume abata RYTHM yaunoda yacho chimurega achiita iyoyo iwe womubatirira kuti asabhudisa chombo ne MISTAKE, Ukahwa oita sokuwedzera sipidhi, sunga masuru atadze kumhanya, Ukahwa unga hwako hwaungana muchiuno chimbomusiya aite zvaanoda iwe chirerusa muviri uone zvinoitika.
Chikapa chinodawo kuti uku uri kuita nechiuno uku uri kuhwa fungwa yako ichibvuma kuti pano ndiri kuita zvakanaka nokuti ndiri kunakigwa, ukuwo muromo uri kududza kuti zviri kuitwa ndizvo. Kungogamuchira murume akumisira chombo kuti unakigwe wakanyarara handizvo. Munhu chemererawo zvinoenderana nezvauri kuita. Kuchemerera kunokubatsira kurerusa muviri kuti ukasire kuita ORGASM. Kana usiri munhu uya anongoti kupinzwa wototanga wega kuchemerera, dzidzira kusaruma mazino kana uchirhojewa, Rega manzwi anoda kubuda abude pamuromo wako. Murume anobva azivawo kuti ari kunaka. Varume havadi zvokuchemerera. Anongozogomera ava kubudisa urume.
Chikapa unyanzvi saka zvinotodzidzwa. Tangira pauri ipapo asi ita attitude yokuda kushandisa chiuno chako. Ita attitude yokuda kushinya chombo chomurume wako. Ita attitude yokuda kuva ne FREEDOM OF EXPRESSION pakurhojana nomurume wako. Kana wazvibata zvese izvi chikapa chinongogozha kana wakapakicha makumbo pamafudzi emurume. Ipapo kuti une chiuno kana kuti hauna hazvina basa. Murume anokuita nhapwa yerhoji chaiyo. Unongohwa uchikurungwa sebota wakahi kwiii. Asi mamwe maitire anoita kushandisa chiuno. Kana wangozvitanga, haumbozozviregi.
Tanga nhasi kufunga kufadzana nomurume wako. Iye achakuudza kuti wagona nhasi. Muchiona nyaya dzedu dzakadai, tinoda kuti varume vedu vazive kuti isu todawo rhoji kupfuura ivo. Saka tovakosva kuti vagare vane fungwa yokutirhoja mazuva ese. Akaona mukadzi wekusango anomunyemwerera anobva ati mumoyo make kumba ndine nyanzvi yazvo zvinhu izvi.
Hatina mhaka nokuti vara iri rakabvepi ngatingoritora richiita redu. Nguva yokuti ndabvisa bhurugwa kuti ndifare ndongoita sokuti ndafosiwa ngaibve mumba. Kana wabvuma rhoji nomurume wako chitaridza kuti murume wako uye ane kodzero yezvinhu izvi.
Maitire: Kana wakavata nedumbu murume akakutanyanga akapinza neshure, ukati simudzirei chiuno ukuwo uchikwira nokudzira murume achikoira unohwa pane moyo chaizvo. Kana ukazoisa ruoko pakati pemakumbo ukatanga kukwenyerera bhinzi yako murume ari mukati uku chiuno uchishandisa, hameno hako.
Kana ukakwira murume, ukada kudzidzira chikapa, udza murume asafakanyika iwe wochimutaridza kushandiswa kwechiuno. Kuva pamusoro pemurume kunokuwedzera maitire akasiyanasiyana. Ukatsamhira murume zvokuti mazamu ako ari pachifuva pake wongotambisa chiuno chete muviri wakarivara, Unohwa kuti chombo chinosvika panhu patsva.
Kana wakafongorawo chikapa hachinetsa futi. Shandisa chiuno.
Maitire akawanda anobvumidza kushandisa chiuno saka shandisa. Zvinotaridza kuti uri kunakigwa nezvauri kuita.
Kutya Chikapa: Vakadzi vechidiki vanotya kutanga chikapa nokuda kwekuti varume vanobva vafunga kuti mukadzi akadzidziswa noumwe murume. Kana uchihwa uchida kuita chikapa asi uchitya, tanga zvishoma zvishoma nhasi, mangwana wowedzera kubatirira murume nokushandisa chiuno. Panozopera mwedzi miviri iye haatombofungi kuti wange usingazvigoni kare. Asizve iwe potawo uchimuudza kuti anokuitisa ude kushandisa chiuno kuti afunge kuti ndiye nyanzvi yazvo.
Varume: Varumewo kurudzirai vakadzi venyu kusununguka pamoyo, pafungwa, panyama, pachiuno. Kwete kubvunza kuti "WAKAZVIDZIDZISWA NANI IZVI?" Mubvunzo wefuza uyu. Kana mukadzi wako afunga kukuitirawo zvakawanda, ari kureva kuti munhu akasununguka newe, iwewo chimukurudzira awedzere. Mukadzi wako munhu anofanira kudzidza zvakawanda saka musi waadzidza chimwe chinhu muudze kuti agona. Anofanira kuva: Read The Complete Article At Mai Chibwe VekwaZimuto Chii Chinonzi Chikapa Mumba.
Articles On Chikapa:
Chii Chinonzi Chikapa Mumba (Part 1)